Dibloomada - Shaqooyinka dhulka Khabiir - Geofumadas
Koorsadani waxaa loogu talagalay dadka isticmaala xiisaha aagga dareenka fog, ee raba inay bartaan qalabka iyo hababka si dhammaystiran. Sidoo kale, kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-dubbaridka macluumaadka dhuleed ee wareegyada kale ee helitaanka, falanqaynta iyo bixinta natiijooyinka maadooyinka kale.
Abuur awoodo ku saabsan helitaanka, falanqaynta iyo bixinta macluumaadka dhulka. Koorsadan waxaa ka mid ah barashada HEC-RAS, oo ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu isticmaalka badan dhanka falanqaynta biyaha; iyo sidoo kale adeegsiga aaladaha xogta CAD / GIS ay ku dhexjiraan maadooyinka kale sida Google Earth iyo AutoDesk Recap. Intaa waxaa sii dheer, waxay ka kooban tahay module wax ku ool ah / fikrad ah oo lagu fahmayo dhammaan wareegga maaraynta macluumaadka ee dareemayaasha fog.
Koorsooyinka waxaa loo qaadan karaa si madaxbanaan, iyadoo la helayo diblooma koorso kasta laakiinDiploma Land wuxuu shaqeeyaa Khabiir»Waxaa la soo saarayaa oo keliya marka isticmaalaha uu qaato dhammaan koorsooyinka safarka.
Faa'iidooyinka lagu dabaqi karo qiimaha Dibloomada - Khabiirka Shaqooyinka Dhulka
Dareemayaasha fog …………………… .. USD 130.00 24.99
Google Earth ………………………………… USD 130.00 24.99
Falanqaynta biyaha HEC-RAS 1 ……… USD 130.00 24.99
Dib -u -habeynta Dib -u -habeynta ………………………. USD 130.00 24.99
Falanqaynta biyaha HEC-RAS 2 ………. USD 130.00 24.99
Blender - Qaabaynta Magaalada… ..USD 130.00 24.99
Post Previous" Hore Diblooma - Khabiir ku takhasusay cilmiga hawada
Post Next Geomoments - Dareenka iyo Goobta hal app ahNext »